IZAO NO FOTOANA TSARA – Blaogin'i Voniary
Aza manjeny andro ho lava ! Izao no fotoana tsara anombohanao izay efa nokasainao hatry ny ela ! Izao no fotoana tsara anatanterahanao ilay nofinofinao. Izao no fotoana tsara anapahana hevitra. Matetika isika miandry olona hafa handray fepetra amin’ny fiainantsika. Ny tena marina anefa dia fiananao io fa tsy fiainany. Ianao no mahalala izay mety aminao. Ianao no tompon’andraikitra voalohany amin’izay lalan-kizoranao.
FANOMEZANA NY ANIO
Sarobidy ny andro iray. Mavesa-danja eo amin’ny fiainanao io matoa nomen’Ilay Nahary anao. Noho izany, aza avela andalo fotsiny ny tombon’andro azonao. Ny olona tena miaina dia mahatadidy izay rehetra nandalovany mandritra ny herinandro raha anontanianao izy. Tsaroany avokoa izany satria mety nahafinaritra azy, mety nampalahelo azy na nahasosotra azy. Ny olona mahay miaina dia tsy hiteny mihitsy fa nandalo fotsiny ny herinandro na tsy hitahita akory dia lasa ny taona. Marina fa toa mihazakazaka ny fotoana, nefa raha mianoka tanteraka ao anatin’ny zava-miseho ianao dia ho hitanao fa mizotra milamina io. Ho ahy ohatra rehefa mitarika fivoriana ao amin’ny « english club » aho dia toa miato ny famataranandro. Ankafiziko tanteraka ny mifampizara amin’ireo namako, hany ka tohinina aho vao tonga saina hoe tapitra ny fotoana. Hoy Eleanor Roosevelt hoe : « Manaova zavatra iray mampatahotra anao isan’andro ». Ny anton’izany dia mba hisy fientanam-po ianao ao anatin’ny andro iray ka ahatsapa fa tena miaina. Tsy voatery zavatra mampatahotra anefa no atao fa zavatra tiana sy mampientana. Amin’izay rehefa atory iny ianao dia ho faly satria tsy very maina ny andronao.
AZA MIANDRY NY FOTOANA LAVORARY
Ankehitriny no fotoana tsara fa atsaharo ny fahazaran-dratsy manemotra amin’ny ampitso lava. Raha te-hanorina orinasa ianao, anio no tokony hanombohanao izany. Raha miandry rahampitso, afaka herinandro na herintaona manko ianao, efa tsy ho tambo isaina ny mpifaninana aminao ka ho sarotra ny ady. Raha te-hiala amin’ilay asa mambotry anao ianao, anio no tokony anapahanao hevitra. Raha miandry fotoana hafa manko ianao dia mety efa ho bevohoka ny vadinao amin’izay, na hisy zavatra hafa ilànao vola ka tsy maintsy iharitra ao ihany ianao. Raha te-handeha hiala sasatra ianao, amboary anio ny fandaharam-potoanao. Raha miandry afaka iray volana manko ianao dia mety ho tsy afa-miala amin’ny asa na hisy trangan-javatra hafa tsy azo ialana. Hoy indrindra ny mpandinika iray, Horace, hoe : « Izay miandry ny fotoana lavorary vao hiaina tsara dia tahaka ilay tsy ampy saina miandry ny renirano ho ritra vao hiampita. » Ny olana, ny sakana, ny krizy, ny mpanakiana, ny mpanatsatso sy ny forongony dia tsy maintsy misy. Tsy ireny akory no anakana anao hanao izay fantatrao fa mety. Natao itsapana ny halalin’ny finoanao sy ny fanirianao ireny. Ny fikirizana sy ny finiavana no hanampy anao hiohitra ireny rehetra ireny.
Raiso ny fanapahan-kevitra anio ! Ao aminao ny hery afahanao manova ny fiainanao sy izao tontolo izao. Efa ao aminao ny toe-tsaina mpandresy ka banjino ny tanjonao. Aza miandry intsony ary fa izao no fotoana tsara.
développement personnel gasy, empowerment gasy, fandraisana an-tànana, fiainako, mpandresy ianao, toe-tsaina mpandresy